ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page 120 of 120 - MM Live News
တာဝန်ပျက်ကွက်မိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် “ပထမဦးဆုံး ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သူ”
6 Comments / ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live News
သို့ ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး အကြောင်းအရာ ။ ။ သုံးခွမြို့အနီးသို့ရောက်ရှိနေသောကုန်တင် သင်္ဘောကြီးအား မသိလိုက်သောကိစ္စ။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍မည်သူကိုမျှ အပြစ်တင်မနေကြရန် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။တကယ်တန်း တာဝန်အရှိဆုံး ဟာ အကျွန်ပ် ရေငံပိုင် ဦးရှင်ကြီးသာဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်ပ်လည်း ခုရက်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မတ္တရာနယ် မင်းညီနောင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တောင်ပြုံးပွဲသို့ရောက်ရှိကာ အထူးထူးသော အရက်များ ကြက်ကျော်ပုဇွန်ကျော် လက်ပြစ်ကျေးများဖြင့် အပျော်လွန်ကာလုံခြုံရေး အရ ငမန်း မိချောင်း ဖျံ တို့အား စဉ်ဆက်မပြတ်နိုးဆော်ထား သော်လည်း ကျွန်ပ် မရှိခိုက်ပေါ့ရော့ကြပါသည် ။ ၎င်းတို့ပေါ့ရော့မှု့ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားကုန်တင် သင်္ဘောကြီးမှာ သုံးခွမြိုအနီး ရေမိုင် ၇မိုင်ထိကျူး ကျော်ဝင်ရောက်နေခြင်းကို ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။၎င်းကိစ္စသည် ကျွန်ပ်ရေငံပိုင် ဦးရှင်ကြီးသာ တာဝန်အရှိဆုံးဟု …
တာဝန်ပျက်ကွက်မိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် “ပထမဦးဆုံး ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သူ” Read More »
အမျိုးသမီးဘဝ မလုံခြုံတော့ပါ နေ့ခင်းဘက်တောင်Taxi တစ်ယောက်ထဲစီးဖို့ အတော်ကြောက်သွားပြီ
24 Comments / ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live News
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေရတဲ့အမျိုးသမီးဘဝတွေမလုံခြုံတော့ပါ နေ့ခင်းဘက်တောင်Taxi တစ်ယောက်ထဲစီးဖို့အတော်ကြောက်သွားပြီး ကားသမားတိုင်းလို့မပြောချင်ပေမဲ့ မရွှေရည်ဝင်းအမှုလိုမျိုးကားသမားတွေရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာရှိနေသေးတာပဲ ကိုယ်တောင်သွေးပူမနေပဲ မှန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းချနိုင်ခဲ့လို့မဟုတ်ရင်အခုချိန်မတွေးရဲစရာပဲ ဒီကားနံပါတ်နဲ့ကားသမားကိုဝေးဝေးရှောင်ကြပါ လွန်စွာမှပင်ယုတ်ညံ့သောအောက်တန်းကျသော တဏှာရူးကားသမားဖြစ်ပါသည် ညီမကတယောက်ထဲစီးလာတာမို့ကားရှေ့ခန်းကလိုက်လာတာ ကားမောင်းပီးခနကြာတော့ သူကသူ့ပုဆိုးကိုအောက်ဖြေချပြီးသူ့အင်္ဂါကိုအပြင်ထုတ်ပြီး ကားကိုမောင်းလာပါတယ် ကားမှန်တွေကလဲအလုံပိတ်ပီးချထားပါတယ် ညီမလဲအမြန်ကားတခါးဆွဲဖွင့်ပီးဆင်းမယ်လုပ်တော့မှသူကကားရပ်ပေးပါတယ် အလွန်စိတ်ဓာတ်ယုတ်မာတဲ့သူပါ အခုပုံထဲမှာသူပုဆိုးကိုဆွဲတင်ထားပီးလက်ကွယ်နေလို့မမြင်ရတာ သူပုဆိုးကိုကြည့်ကြည့်ပါ ချွတ်ပီဖြေချထားတာ ကားရပ်မှသူကပုဆိုးကိုပြင်ဝတ်ပြီးအောက်ဆင်းလာတာညီမလဲကိ်ုယ်တယောက်မို့အမြန်ဆင်းပီးထွက်လာခဲ့ရတယ် Cherry Than Win is with Su Helen and 13 others. ======== မွနျမာနိုငျငံမှာနနေရေတဲ့အမြိုးသမီးဘဝတှမေလုံခွုံတော့ပါ နခေ့ငျးဘကျတောငျTaxi တဈယောကျထဲစီးဖို့အတျောကွောကျသှားပွီး ကားသမားတိုငျးလို့မပွောခငျြပမေဲ့ မရှရေညျဝငျးအမှုလိုမြိုးကားသမားတှရေနျကုနျမွို့ကွီးထဲမှာရှိနသေေးတာပဲ ကိုယျတောငျသှေးပူမနပေဲ မှနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုခကျြခငျြးခနြိုငျခဲ့လို့မဟုတျရငျအခုခြိနျမတှေးရဲစရာပဲ ဒီကားနံပါတျနဲ့ကားသမားကိုဝေးဝေးရှောငျကွပါ လှနျစှာမှပငျယုတျညံ့သောအောကျတနျးကသြော တဏှာရူးကားသမားဖွဈပါသညျ ညီမကတယောကျထဲစီးလာတာမို့ကားရှခေ့နျးကလိုကျလာတာ ကားမောငျးပီးခနကွာတော့ သူကသူ့ပုဆိုးကိုအောကျဖွခေပြွီးသူ့အင်ျဂါကိုအပွငျထုတျပွီး ကားကိုမောငျးလာပါတယျ ကားမှနျတှကေလဲအလုံပိတျပီးခထြားပါတယျ ညီမလဲအမွနျကားတခါးဆှဲဖှငျ့ပီးဆငျးမယျလုပျတော့မှသူကကားရပျပေးပါတယျ အလှနျစိတျဓာတျယုတျမာတဲ့သူပါ အခုပုံထဲမှာသူပုဆိုးကိုဆှဲတငျထားပီးလကျကှယျနလေို့မမွငျရတာ သူပုဆိုးကိုကွညျ့ကွညျ့ပါ ခြှတျပီဖွခေထြားတာ ကားရပျမှသူကပုဆိုးကိုပွငျဝတျပွီးအောကျဆငျးလာတာညီမလဲကျိုယျတယောကျမို့အမွနျဆငျးပီးထှကျလာခဲ့ရတယျ …
အမျိုးသမီးဘဝ မလုံခြုံတော့ပါ နေ့ခင်းဘက်တောင်Taxi တစ်ယောက်ထဲစီးဖို့ အတော်ကြောက်သွားပြီ Read More »
ဥရောပ နည်းပညာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဘတ်စ် ကားတွေထုတ်လုပ်တော့မည်….
3 Comments / ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live
သာဂရ အမှတ် ၁၄ အကြီးစားစက်ရုံကနေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ ဥရောပ နည်းပညာနဲ့ လျှပ်စစ်ဘတ်စ် ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတခုနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်တယ်လို့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ဆိုပါတယ်။ “သာဂရစက်မှုနယ်မြေမှာရှိတဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်တဲ့ အမှတ် ၁၄ အကြီးစားစက်ရုံမှာ diesel fuel ကို LNG နှစ် မျိုးသုံး Dual fuel type အင်ဂျင်တွေကို ဈေးကွက်ဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား(Electric Bus) တွေကို ဥရောပနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Green Power Myanmar Co.,Ltd. နဲ့ အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်” ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက ပြောပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် …
ဥရောပ နည်းပညာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဘတ်စ် ကားတွေထုတ်လုပ်တော့မည်…. Read More »
ရှာမှ ရှားတဲ့ တက္ကစီမယ်
LeaveaComment / ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live News
ရှာမှ ရှားတဲ့ တက္ကစီမယ် ၂၁ ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ “နွားခြေရာခွက်အတွင်းမှ ဖားသူငယ်” လိုမျိုး အပြင်ကိုမထွက် ဘဲအတွင်းမှာသာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ထိခိုက်လာ နိုင်မယ်လို့ သိမြင်လာကြတဲ့နောက် အမျိုးသားများနဲ့ရင်ပေါင်တန်းကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာကြတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ သမားရိုးကျပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဈေးရောင်းမယ်၊ စက်ချုပ် မယ်၊ အရောင်းစာရေးမလုပ်မယ် စတာ တွေအပြင်ကို သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးထုနဲ့ မအပ်စပ် ဘူးလို့ မြန်မာလူမှုအသိုင်းအ၀န်းက လက်ခံထားကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလာ ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ အမျိုးသမီး Taxi ယာဉ်မောင်းခြင်းနဲ့ အဓိကအသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေပြီး သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ် ယောက်ကို ယခုတစ်ပတ်တင်ပြသွားမယ့် အမျိုးသမီးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကဏ္ဍမှာ …
ရှာမှ ရှားတဲ့ တက္ကစီမယ် Read More »
ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်းသို့ လူတစ်စုက တုတ် ဓားများနှင့် ၀င်ရောက်ပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ရိုက်နှက် ခုတ်ဖြတ်မှု
LeaveaComment / ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live
ရွှေညောင်တွင် ဘုန်ကြီးကျောင်းအတွင်း လူတစ်စု ၀င်ရောက် ရိုက်နှက် ဖျက်စီး သံဃာ(၃)ပါးဒဏ်ရာရ ရွှေညောင်မြို့ အောင်သပြေအပိုင် မင်္ဂလာရပ်ကွက် နယ်မြေ၁၂ရှိ နဂါးရုံ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်းသို့ အမည်မသိ လူတစ်စုက စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့ညတွင် တုတ် ဓားများနှင့် ၀င်ရောက်ပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် သံဃာတော်များ ကျောင်းများကို လိုက်လံ ရိုက်နှက် ခုတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၅ရက်နေ့တွင် ​ကျောင်းထိုင်​ဆရာ​တော်​က​ပြောသည်​။ ယင်းသို့ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနှင့် ဦးဇင်းနှစ်ပါး အရိုက်ခံရပြီး ဦးဇင်းတစ်ပါးမှာ လက်ကျိုးပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲသည့် အတွက် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ဆရာ​တော်​က ​ပြောသည်။ အရိုက်ခံရသည့် စက်တင်ဘာ၎ရက်နေ့ည ၁၀နာရီဝန်းကျင်တွင် ကိုရင်များမှာ အနီးအနားရှိ တောအုပ်ထဲသို့ ပြေးဝင်ရပြီး ကိုင်ရင်သုံးပါးမှာ ယနေ့ (စက်တင်ဘာ …
ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်းသို့ လူတစ်စုက တုတ် ဓားများနှင့် ၀င်ရောက်ပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ရိုက်နှက် ခုတ်ဖြတ်မှု Read More »
မုန်တိုင်းငယ်သတင်း – နောက်(၁၂)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) အမှတ်စဉ်(၀၁)၊၂၀၁၈ မုန်တိုင်းငယ်အခြေအနေ ================== (က) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၁:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်း လာကာ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဒီဂါ (Digha)မြို့၏ အရှေ့- အရှေ့မြောက်ဘက် (၅၅)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြု နေပါသည်။ (ခ) မုန်တိုင်းငယ်(Depression)၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည် ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းငယ်၏တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း (က) အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်(Depression)သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၁:၃၀)နာရီအချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု (၂၁.၈)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၈.၀)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက် လေဖိအား (၉၉၂)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင် (၃၀)နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ …
မုန်တိုင်းငယ်သတင်း – နောက်(၁၂)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက် Read More »
ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားနှင့်အပြိုင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတံတားဖြစ်လာမယ့် ဂုတ်တွင်းတံတားသစ်
ဂုတ်တွင်းတံတားသစ်စီမံကိန်းမှာ မြေယာလျော်ကြေးမယူတဲ့ တောင်သူ ၆၂ ဦးကျန်ရှိနေပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့နားချပေးဖို့၊ တစ်ကယ်လို့လျော်ကြေးမယူပါက နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံကိန်းဖြစ်တာကြောင့် မြေသိမ်းဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် ၄ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအုန်းကျော် မေးမြန်းတဲ့ “ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲခရိုင်အတွင်းရှိ နောင်ချိုမြို့ရှောင်လမ်းစီမံကိန်း (သို့) ဂုတ်တွင်းတံတားသစ်ချဉ်းကပ်လမ်းစီမံကိန်း” နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာအထက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေ အမြဲလိုလို ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်က ဂုတ်တွင်းနေရာမှာ တည်ဆောက်မယ့် အဆိုပါ တံတားသစ်နဲ့ နောင်ချိုမြို့ရှောင်လမ်း စီမံကိန်းမှာ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းက စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာပေါင်း ၁၆၉.၉၉ ဧက နဲ့ နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းက စိုက်ပျိုးမြေနဲ့သစ်တောမြေ ၃၂၉.၇၄ ဧက ပါဝင်ကြောင်း၊ ယင်းအထဲမှာ မြေ ၃၆.၃၅ ဧကဟာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပိုင်ဖြစ်တာကြောင့်မြေယာလျော်ကြေးပေးဖို့မလိုဘဲ ကျန်မြေ ၃၆၃.၃၈ …
ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားနှင့်အပြိုင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတံတားဖြစ်လာမယ့် ဂုတ်တွင်းတံတားသစ် Read More »